Unyaka Omusha Wama-Lunar: izici, izinkolelo-ze kanye nokuthanda ukwazi Isimo Sezulu Senethiwekhi
Elinye lamaholide amade kakhulu futhi abaluleke kakhulu kukhalenda lamaShayina yi unyaka omusha wenyanga. Kungumgubho wezinsuku eziyi-15 ogcwele imikhosi, ukuhlangana kwemindeni, ukupha izipho, umdanso wedrako, namaphakeji aziwa ngokuthi "hong bao." Yonke le mikhosi idayiwe yabomvu kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi amaShayina abheka umbala obomvu njengombala wenhlanhla.
Kulesi sihloko sizochaza konke odinga ukukwazi mayelana nonyaka omusha wenyanga kanye nezifiso zawo.
2 Izinkolelo-ze Zonyaka Omusha WamaShayina
3 Ukufuduka konyaka omusha we-Lunar
Unyaka omusha wenyanga waziwa nangokuthi igama lonyaka omusha wamaShayina noma umkhosi wasentwasahlobo. Lokhu kungenxa yokuthi ziqala ngqo ngenyanga yesibili ngemuva kwe- solstice ebusika. Lolu usuku olungasuka ekupheleni kukaJanuwari luye maphakathi noFebhuwari. Kulo nyaka ibibungazwa kusukela ngoMgqibelo, Januwari 25. Yilapho kwaqala khona unyaka ka-4717, unyaka wegundane.
Ngokungafani noNyaka Omusha emhlabeni wonke, lapha imikhosi ayihlali usuku olulodwa nje. Imikhosi iqala ngosuku lokuqala lwenyanga yokuqala ekhalendeni laseChina futhi idlulela izinsuku eziyi-15 lapho kufika inyanga egcwele. Sonke lesi sikhathi, amalungu omndeni ahlangana futhi ahambe amabanga amade ukuze afike ekhaya azobona abathandekayo. Lokhu kubhekwa njengokufuduka okukhulu kwabantu. Kubantu abaningi, ukuphela kwesikhathi sonyaka lapho benesikhathi sokuya ekhaya balethe izikhwama zezipho kumalungu omndeni.
Ukugubha unyaka omusha kwenyanga kunento ekhethekile ezinsukwini eziyishumi nanhlanu ezihlala khona. Usuku ngalunye lunomgubho namasiko awo. Ngobusuku bangaphambi konyaka omusha, umndeni ubuthana esidlweni ndawonye. Kungamasiko athile ukuhlala ekhaya ukuze uthole inhlanhla enkulu noma uvakashele inhlabathi. Ngaphezu kwalokho, esinye sezipho ezingokomfanekiso ukulethwa kwemali ngemvilophu ebomvu. Lezi zimvilophu ezinemali zaziwa ngegama elithi "hong bao" futhi zikhethekile ngoba ziletha inhlanhla enkulu ngenxa yombala obomvu ojulile. Imvamisa zinikezwa izingane nabantu abadala kanye nozakwethu.
Kuzoba khona futhi nesiko lokwethula iziqhumane. Lokhu kususelwa kusiko lakudala lokukhanyisa izingongolo zoqalo ukuxosha imimoya emibi. Esinye sezici ezinelukuluku kunabo bonke bonyaka omusha wenyanga umbukiso wengxenye yedrako uhhafu wengonyama. Iyaziwa ngegama likaNian futhi idume kakhulu emhlabeni wonke. Inganekwane ithi uyaphuma lapho ecashe khona ngonyaka omusha ukuze ahlasele abantu. Kodwa-ke, izindlebe zakho zingubuthakathaka bakho. Lokhu kudala ukuthi ezinsukwini zakudala abantu babeshisa izikhotha zoqalo ukuze bakwazi ukwethusa le nhlangano. Ngokuhamba kwesikhathi nangokuthuthuka kobuchwepheshe, lokhu kuholele ekutheni kwethulwe iziqhumane ezizodala umsindo.
Izinkolelo-ze Zonyaka Omusha WamaShayina
Unyaka omusha wenyanga uphela ngomkhosi wezibani. Kubungazwa ebusuku ngamathanga nokukhonjiswa kwezibani ezihlotshiswe ngesihloko sesikhashana. Kungumcimbi ophambili wosuku futhi ubonakala ngomdanso wedrako. Kungumcimbi othakazelisa kakhulu lapho singabona khona amadragoni amahle enziwe ngephepha, usilika noqalo futhi abanjwe emakhanda. Konke lokhu kunikeza umuzwa wokuthi babonakala bedansa phakathi nombukiso.
Unyaka omusha wenyanga ubuye ube nezinkolelo-ze ezahlukahlukene. Esokuqala ukuthi awukwazi ukukhipha udoti. Isizathu salokhu ukuthi uma ubheka udoti ngesikhathi sonyaka omusha, uyakwazi ukusula inhlanhla nokuchuma. Lokhu kusho ukuthi kufanele uchithe isikhathi nomndeni wakho, ikakhulukazi nabasekhweni labo nezihlobo zomlingani wakho. Lokhu kumele kwenziwe ngosuku lwesibili oluthathwa njengokuqala konyaka.
Ngokuphambene, phakathi nosuku lwesithathu kungcono ukuthi ungavakasheli muntu. Lokhu kungenxa yokuthi kubhekwa njengosuku lapho lowo muntu ethambekele kakhulu ekuphikisaneni, ngokwesiko. Sekuvele ngosuku lwesikhombisa lapho nizokwazi ukugubha khona. Okubomvu umbala ongeke ulahleke nganoma yisiphi isikhathi. Lo mbala uhlotshaniswa nenhlanhla nokuchuma. Ikakhulu umbala obomvu usetshenziselwa ukuhlinzeka ukuvikelwa kwabathandekayo. Iphinde isetshenziselwe ukwethusa i-monster uNian, ngoba umbala oyethusa yona.
Ukufuduka konyaka omusha we-Lunar
Njengoba kungomunye wemicimbi ebaluleke kakhulu yamaShayina, yi-protagonist yokunye kokufuduka okukhulu kwabantu emlandweni wonke. Ngesikhathi sonyaka omusha ongena enyangeni kuvame ukuba nohambo olungamabhiliyoni ama-3.000 olwenzeka enkathini yezinsuku ezingama-40 eChina. Iningi lolu hambo lwenzeka phakathi kukaJanuwari 9 noFebhuwari 18. Bonke laba bantu bayathutha bagubhe unyaka omusha wenyanga. Ngakho-ke, kubhekwa njengokufuduka kwabantu okukhulu kakhulu emhlabeni.
Kusuka kulo lonke lolu hambo Izigidi ezingama-440 zizokwenziwa ngesitimela, cishe eziyizigidi ezingama-79 ngendiza, yize iningi lenziwa ngemoto noma ngesithuthuthu. Ngoba kungenye yemicimbi elindelwe kakhulu onyakeni, amaShayina enza noma yini edingekayo ukuze akwazi ukubona abathandekayo bawo. Kulo nyaka sibe nenkinga enkulu yobhadane lwe-coronavirus, ngakho-ke lo nyaka omusha wenyanga uthintekile ukuqhamuka kwalesi sifo.
Esinye sezifiso ezithakazelisa kakhulu zonyaka omusha wenyanga ukuthi ziyazihlonza nezilwane. Inganekwane yaseChina ithi uBuddha ubize zonke izilwane ukuba zihlangane naye ngoSuku Lomnyaka Omusha. Wabiza inani lezilwane eziyi-12 ku. Ngakho-ke ekhalendeni lamaShayina ungabona ukuthi zonke lezi zilwane zikhona inja, ingulube, igundane, inkabi, ihlosi, unogwaja, udrako, inyoka, ihhashi, izimvu, inkawu nehhashi. Lesi siko sibuye sithi bonke abantu abazalwa onyakeni ngamunye wezilwane banobuntu obuthile besilwane esishiwoyo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nonyaka omusha wenyanga.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Unyaka omusha we-Lunar